Maragga: Sidee ayaan la badbaadiyey | Apg29
Maalin maalmaha ka mid waxa aan ogaaday in Rabbigu waa run ahaantii sara kacay, oo ku guuleystay leeyay.
Rabbigu wuxuu ogaa wuxuu i qaadi lahaa. Wuxuu i sii daa aan akhriyey oo fahmay xadka sayniska. Maalin maalmaha ka mid waxa aan ogaaday in Rabbigu waa run ahaantii sara kacay, oo ku guuleystay leeyay.
Ayeeyo i siiyey iimaanka carruurnimada, laakiin waxaan marnaba u tegey inuu kaniisadda. Xaqiijinta ahaa mid cajiib ah, laakiinse anigu uma aan sax ahaa. Waxaan akhriyey qaar ka mid ah fiqiga, laakiin virrade.
Runta waxa ay daalaeday nacas, oo anna waxaan la baabtiisay. Masiixiyiinta ah ee magaaladuna waxay ahayd caawimo aad u weyn. Nalen la yar ay ahayd bar dhalaalaysa.
Waxa ay keentay in ay guri guri ka qaybsamaana, waxaa laga yaabaa in aan la sameeyey markii xididka karbaash ka bidix, laakiin sidoo kale in ay dhowr qaraabada ay badbaadeen. Murugo iyo farxad. nooleenta ayaa ku soo beegmay iyada oo murugo iyo farxad, sida wadaad Pentecostal ah ayaa sheegay in sida uu ku jiifay ee uu sakaraad.
Rabbiga ma noo qaado si la mid ah, sababtoo ah waxaan heysanaa baahiyaha kala duwan. Chris gabyaa jir ah u qurux badan oo hadal qalbiga ku jira. wacyigaliyo Qaar ka hadli Word run Ilaah. pagers Qaar ka mid ah wax ka barato Kitaabka Quduuska ah oo culus. Qaar ka mid ah, aniga oo kale, waxay u baahan yihiin in ay ku habboon badan oo laga hadlo sayniska.
Rabbiga ka hooseysa laga bilaabo marka uu u shaqeeyo. My iyo carruurnimada kale ahaa xun la karbaash iyo murugo. barakada A ee isbeddel. Rabbigu wuxuu maqlay wiilka qaylinaya meesha Ismail lagu tuuray hoos baadiyaha ah.
Ma aha oo dhan waa reer qarniyada oo dhawr ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah, laakiin waxaa ay ahaayeen masiixiyiin aamin ku ah qoyskayga ee 1800. Toddoba wadaadada Baabtiisaha u tageen inay Mareykanka iyo mid ka mid ah ayaa ku dhintay sida adeegayaasha ah ee Congo.
Markaasuu qaaday waqtiga cusub. Markaas dhexgalay Rabbiga in aan xaq u iman lahaa.
Kanu waa maraggii iyo akhristaha email ah. aragtidayda gaarka ah waa qoraaga.